साताको शेयर बजार : दुई अर्ब ३९ करोडको कारोवार - NepalKhoj
साताको शेयर बजार : दुई अर्ब ३९ करोडको कारोवार
नेपालखोज २०७६ पुष १९ गते १५:५२
१९ पुष, काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा यस साता कूल १८१ कम्पनीका ७१ लाख ८४ हजार ६३९ कित्ता शेयर खरीद बिक्री भए । बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक तुलनात्मकरूपमा अस्थिर रहेको बेला साताभर रु दुई अर्ब ३९ करोड ९२ लाख ७३ हजार ६५ बराबरको कारोवार भयो ।
साताको पहिलो दिन आइतबार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक झण्डै पाँच अङ्कले ओरालो लाग्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ४।९९ विन्दुले ओरालो लागेर एक हजार १६२।४३ मा पुग्यो ।
सोमबार साढे पाँच अङ्कले बढेको नेप्से मङ्गलबार भने झिनो अङ्कले घट्यो । सो दिन नेप्से परिसूचक १।९२ विन्दुले घटेर एक हजार १६६।०३ मा पुग्यो । कूल १७७ कम्पनीको १३ लाख दुई हजार ९८६ कित्ता शेयर रु ४४ करोड २२ लाख ५६ हजार १५६ मूल्यमा खरीद–बिक्री भए ।
बुधबार कूल १७६ कम्पनीका ११ लाख ७५ हजार ३१३ कित्ता शेयर रु ३७ करोड ९९ लाख ८८ हजार ३०१ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । साताको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से परिसूचकमा सामान्य गिरावट आयो । नेप्से ३।२९ अङ्कले घटेर एक हजार १६६।२१ मा पुग्यो । परिसूचक घटे पनि कारोवार रकम भने ५० करोड नाघेको छ । स्टकका अनुसार त्यस दिन १७० कम्पनीका १६ लाख ६० हजार ४०६ कित्ता शेयर रु ५३ करोड २२ लाख ११ हजार २११ मा खरीद बिक्री भए ।
नेप्सेको उच्च अंकको गिरावट कायमै, ४५ अंकले घट्दा पनि १ अर्ब ४९ करोडको कारोबार
विश्व सेयर बजारमा गिरावट कहिलेसम्म ? आर्थिक संकटको खतरा !
एक दिन पनि टिकेन नेप्सेको उच्च वृद्धिदर, ३१ अंकले घट्दा ८४ करोडको कारोबार